Hel Caawinaad Bixinta Daryeelka Ilmaha - Xannaanada Ilmaha San Diego
Hel caawimo bixinta
xanaanada caruurta ee kuu dhow
ee San Diego
Waxaan qoysaska ku xiraa wakaaladaha leh kaalmada daryeelka ilmaha la kabo.
Eeg haddii aad u qalanto
Xanaano maalmeed ama xanaanada cunugga kuugu dhow ee San Diego
Ma jiro waalid inuu doorto
inta u dhaxaysa kirada iyo daryeelka ilmaha
Nasiib darro, xanaanada carruurta ee qaaliga ah waxay ka joojisaa qoysaska inay helaan gargaarka ay u baahan yihiin si ay u koraan.
Haddii aan la helin daryeel ilmo oo la isku halleyn karo, waalidiintu ma shaqeyn karaan waqti buuxa ama dib ugu laaban karaan dugsiga.
Waalidiintu waxay heli karaan caawimo bixinta kharashka daryeelka ilmaha
Kaalmada daryeelka ilmaha ee la kabo
Waxa laga yaabaa inaad u qalanto inaad hesho qayb ahaan ama si buuxda loo daboolay lacagaha daryeelka ilmaha.
Adiga ayaa dooranaya daryeelka aad rabto.
Waad awoodaa inaad dooro bixiyaha xanaanada cunugga kaasoo buuxiya baahiyahaaga, hadday tahay xarunta daryeelka carruurta, daryeelka carruurta qoyska ku salaysan, ama saaxiib ama xubin qoyskaaga ah.
Hel caawimo bixinta kharashka daryeelka ilmaha
Waxaad u baahan tahay xanaano caruur oo la awoodi karo oo aad isku hallayn karto si aad diiradda u saarto inaad ku noqoto shaqada ama dugsiga waqti buuxa.
Sida kaalmada daryeelka carruurtu u shaqeyso
Waxaad buuxinaysaa codsi
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah inaad u baahan tahay kaliya inaad buuxiso 1 codsi. Waanu samayn doonaa inta hadhay oo macluumaadkaaga wakaalada ayaan kuu soo gudbin doonaa.
Bilow inaad raadiso daryeelka ilmaha aad rabto
Waa muhiim inaad doorato bixiyaha xanaanada cunuggaaga ka hor intaysan wakaaladu kula soo xiriirin. Raadi daryeelka carruurta.
Marka maalgelinta la helo, mid ka mid ah hay'adaha aan wada shaqaynta leenahay ayaa kula soo xidhiidhi doona
Waxaad kordhinaysaa fursadahaaga lagugu soo dooran karo sababtoo ah hadda waxaa ku arkay wakaaladaha aan wada shaqaynta leenahay.
Raadi daryeelka carruurta
Ogow haddii aad u qalanto
Kali ma tihid.
La kulan Shuraakada Wakaalada ee raba inay ku caawiyaan.
Waxaan fahamsanahay sida ay u niyad-jabsan tahay in aad daryeesho carruurtaada oo aad shaqeyso shaqo waqti-buuxa ah. Taasi waa sababta aan u caawinno kumanaan qoys inay awoodaan xannaanada carruurta iyo xannaanada carruurta si ay waalidiintu mar labaad ugu noqdaan shaqada ama dugsiga.
Adeegga Ilaha Xannaanada Ilmaha ee YMCA
Adeegga Ilaha Xannaanada Ilmaha ee YMCA, waxaanu aaminsanahay in lagu xoojiyo qoysaska iyo xirfadlayaasha daryeelka ilmaha iyada oo loo marayo taageerooyin dhammaystiran, hubinta in dhammaan carruurta iyo dhallinyaradu ay gaaraan awooddooda ugu buuxda.
Associates Development Associates
Laga soo bilaabo 1974, Associates Development Associates waxay u abuuraysay fursado qoysaska, carruurta, iyo bixiyeyaasha xanaanada cunugga si ay u koraan.
Ururka Guriga Xaafada
NHA waxaa la aasaasay 1914, barnaamijyada hadda waxay u dhexeeyaan horumarinta carruurnimada hore ee Head Start ilaa barnaamij nafaqo oo hal-abuur leh, barnaamijyada caafimaadka sida maaraynta kiis HIV/AIDS, adeegyada caafimaadka dhimirka, iyo adeegyada daryeelka caafimaadka maalinta dadka waaweyn, adeegyada dhalinyarada, iyo adeegyada sare.
Adeegyada Bulshada Episcopal
ECS waxay siisaa in ka badan $30 milyan adeegyada caafimaadka iyo bini'aadmiga ee meelaha hoy la'aanta, caafimaadka dhimirka, daaweynta khalkhalka isticmaalka mukhaadaraadka iyo waxbarashada carruurnimada hore in ka badan 6,000 oo macaamiisha San Diego ah.
Waxa ay waalidiinta kale leeyihiin
"Markii aan dalbaday Kaalmada Daryeelka Ilmaha, weligay ma dareemin in lagu xukumay habka diiwaangelinta. Helitaanka gargaarku waxay noqon kartaa cabsi, gaar ahaan marka aad hesho adeegyo bilaash ah. Hay'aduhu waxay ula dhaqmi doonaan qoyskaaga si faham, naxariis, iyo ixtiraam leh."
"Waxaan mar horeba ku dhibtoonaynay inaan bixinno kharashka xannaano-maalmeedka ee billaha ah. Markii aan maqlay wax ku saabsan caawimada YMCA, runtii uma malaynayn in aan heli doono fursad aan kaga mid noqdo barnaamijka tan iyo markii aan aad uga daahay ciyaarta si aan u codsado. Aad baan ugu faraxsanahay in la iga aqbalo barnaamijkan oo aan helo caawimaadda bilaha ah ee aan u baahanahay inaan helno. Waxay naga caawinaysaa inaan helno biilasha kale ee aan gadaal ka joogno."
"Adigoo ah waalid keligiis ah, ka shaqeynta iyo aadista dugsiga waa caqabad. Xanaanada caruurtuna aad bay qaali u tahay. Mahadsanid, CDA waxay i siisay adeegyada daryeelka ilmaha ee aan ugu baahanahay gabadhayda. Hadda waxay aadaysaa xannaano u dhow gurigayaga, halkaas oo ay jeceshahay macalimiinteeda iyo asxaabteeda."
"Waxa uu ahaa sanad adag, laakiin aad ayaan u farxay markii aan telefoon ka helay CDA. Waxaan awooday inaan si buuxda u shaqeeyo halka labadayda wiil ay aadayaan xanaanada iyo barnaamijka dugsiga kadib. Maan awoodin inaan bixiyo dhammaan khidmadaha xanaanada cunugga haddii aysan ahayn caawinta CDA."
3 Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo
Sideen ugu qalmaa kaalmada daryeelka ilmaha?
U qalmida kaalmada daryeelka ilmaha la kabo waxay ku salaysan tahay 3 arrimood: Dakhligaaga guud ee bisha ee dhammaan ilaha (cashuurta ka hor) Tirada qoyska, iyo baahida. Intaa waxaa dheer, qoysasku waa inay ku noolaadaan Degmada San Diego si ay ugu qalmaan. Eeg haddii aad u qalanto, isticmaal xisaabiyahayada xaq u yeelashada.
Nasiib darro, ma jirto qaab aad liiska ugu "kufsan karto". Si kastaba ha ahaatee, haddii ilmahaagu ku jiro xaalad khatar ah ama deegaan waxyeello leh, nala soo xiriir isla markiiba. Dawladdu waxay siisaa dookh qoysaska leh kiis firfircoon oo Ilaalinta Carruurta si looga saaro carruurta deegaanka waxyeellada leh. Waxaan kuu soo jeedinaynaa talaabada ugu fiican ee aad qaadi karto waa inaad xogta codsigaaga cusboonaysiiso 3dii biloodba mar si aanu u ogaano inaad wali sugayso caawimada daryeelka ilmaha ama xanaanada.
Su'aalo badan arag
5 tillaabooyinka doorashada daryeelka ilmaha
Ka soo deji hagahaaga bilaashka ah ee shuraakadayada
Marka ay wakaaladu kula soo xiriirto, waxaa muhiim ah in mar horeba lahelo xanaano caruur ama xanaano maalmeed oo qoyskaaga loo doortay. Isticmaal hagahayaga bilaashka ah si uu kaaga caawiyo inaad doorato daryeelka ilmaha ama xanaanada saxda ah ee qoyskaaga.